Shina avo lenta FFP2 NR fonosana saron-tava tsy misy fitsaboana | Eisen
Firafitry ny fitaovana: 48,65% PP spunviscose lamba tsy tenona, 27% landihazo rivotra mafana sy lamba 24,35% namboarina fusion
Saron'ny filofosan'ny sarontava EN149 FFP2
Famaritana vokatra: tapa-kazo 2
Fonosana: sombi-javatra 20 ao anaty boaty iray ary avy eo in-1000 ao anaty baoritra, ny haben'ny baoritra dia 52 * 34.4 * 62cm, 9 kg isaky ny boaty.
Anaran'ny vokatra: Saron-tava tsy fitsaboana FFP2 NR
Fotoana fanaterana: manodidina ny 3 ~ 7 andro amin'ny rivotra, manodidina ny 20 ~ 30 andro an-dranomasina
Fitsipika fanatanterahana: EN149: 2001 + A1: 2009
Validiny: 2 taona
Toe-javatra fitehirizana atolotra: hamandoana latsaky ny 80%, entona tsy manimba ary efitrano madio madio.
* Tandremo alohan'ny fitoriana, ny mpamaky dia tsy maintsy mamaky ny torolàlana. Tehirizo azafady mba hanoro anao ireto torolalana ireto.
Fomba fitafy: sokafy ny saron-tava ary pres eo amin'ny tetezan'ny orona aorian'ny anaovanao azy. Ny vokany miaro dia tsara kokoa.
Fonosana: sombiny 40 ao anaty boaty iray ary avy eo in-1200 anaty baoritra, ny haben'ny boaty dia 57 * 47 * 46cm, 11kg / baoritra tsirairay
Orinasa fitaovana fitsaboana any Shina izahay, mifandraika indrindra amin'ny vokatra azo ampiasaina amin'ny fitsaboana azo ampiasaina, toy ny sarontava amin'ny fandidiana, sarontava tarehy, saron-tava KN95 ary saron-tava FFP2 NR. Ny antontan-taratasy rehetra sy ny fankatoavana avy amin'ny governemanta dia PASS, ankoatr'izay, izahay dia mpikambana ao amin'ny Lisitra Fotsy an'ny Mpanome alalana avy amin'ny governemanta sinoa.
Tranonkala fangatahana lisitra fotsy: www.cccmhpie.org.cn
Fanamarinana tazoninay: CE & EN 14683 / FDA GB32610 / GB2626-2006 ISO13485: 2016 / No.88 amin'ny Lisitra fotsy
Ho an'ny firaketana, ny maodelinay LZY03, kilasy FFP2 dia mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin'ny EN149: 2001 + A1: 2009 fitaovana fiarovana suction.
Manome toky anao izahay fa marina sy feno ireo fampahalalana etsy ambony ireo, ary ho tompon'andraikitra amin'ny andraikitra ara-dalàna izahay raha diso ny iray amin'ireo fampahalalana etsy ambony ireo.
F1. Manana MOQ ve ianao?
Miankina amin'ny hevitra samihafa, azo ifampiraharahana. Ny lehibe kokoa dia ny fifaninanana, ny vidin'ny singa.
F2. Tokony handoa ny saram-pandefasana ve ny mpanjifa, ohatrinona?
Ho an'ny saram-pandefasana dia santionany maro no angatahina halefa, noho izany dia tsy maintsy mahazo sarany fandefasana izahay. Raha miteny ahy hampiasa ilay voatondro Express ianao dia homenao ahy ny kaontinao raha tsy izany dia handoa ianao araka ny Express. Raha tsy mangataka ianao dia hisafidy iray mora vidy any Shina aho.
Q3.Ahoana ny serivisy aorian'ny fivarotana?
1) Hotazominay foana ny kalitao mitovy ary raha misy zavatra misy kalitao dia hanao compensaton ho an'ny mpiara-miasa izahay.
2) Hanoro hevitra ny fonosana izahay ary handray andraikitra amin'ny famonosana entana, hitazona ireo entana ho azo antoka amin'ny fanaterana izahay.
3) Hizaha ny entana avy amin'ny famokarana ka hatramin'ny fivarotana, hivoahanay ny olana amin'ny fivarotana ho an'ny mpiara-miasa aminay.
F4. Rahoviana aho no mahazo vidiny?
Matetika izahay dia mitanisa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny hahitanay ny fanontanianao.
F5: Orinasa mpivarotra ve ianao?
A: mpanamboatra matihanina amin'ny orinasa izahay.
Previous: Saron-tava 5 ply KN95 / FFP2 tsy saron-tava
Manaraka: Saron-tava Earloop tsy misy fitsaboana FFP3 NR avo lenta
Saron-tava 5 KN95 saron-tava fitsaboana
Sarimihetsika avo lenta 5 ply KN95 Protective Mask